अस्मिता अधिकारीलाई ’छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार’
’छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार २०७९’ गायिका अस्मिता अधिकारीलाई प्रदान गरिने भएको छ । गुठीले हरेक वर्ष गायक÷गायिकालाई सम्मान गर्दै छिन्नलता गीत पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । यो वर्षको प्रतिभा पुरस्कार अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । ’छिन्नलता पुरस्कार! ओहो! छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कारमार्फत सम्मानित हुन लागेको थाहा पाउँदा एकछिन त कस्तो अवाक नै भएँ उनले…
किन अगाडि बढ्न सकेन ‘सत्यम’को छायांकन ?
घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि फिल्म ‘सत्यम’को छायांकनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । फिल्मका मुख्य अभिनेता मध्येका एक पल शाह बलात्कार अभियोगमा जेल गएपछि फिल्म छायांकनमा ढिलाई भएको हो । निर्माता रेशम सापकोटा पल शाहको घटनाको छानविन निष्कर्षमा नपुगेसम्म यो प्रोजेक्टको छायांकन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न कठिन भएको बताउछन् । उनले फिल्म बन्ने…
पल शाहको मुद्दामा सुनुवाइ आज, जेलमुक्त होलाकी नहोलान ?
बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नायक पल शाहको मुद्दामा आज उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ हुने भएको छ । बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँ र पूर्व नवलपरासीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठान आदेश दिएपछि पल शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जसको सुनुवाई आज उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त…
भुवन केसीलगायत चर्चित कलाकारहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश
अभिनेता भुवन केसी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । अभिनेता केसीसहित कलाकार रविन्द्र खड्का र अभिनेत्री श्वेता खड्का पनि कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरुलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्...
भुवन केसी सहितका कलाकार कांग्रेस प्रवेश
यस अगाडि काठमाडौ महानगरपालिकाको मेयर उठने चर्चा चालाएका अभिनेता भुवन केसी चुनाबी संघारमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केसीसहित अन्य कलाकारलाई काग्रेश प्रवेश गराएका हुन् । केशी सँगै देउवाले टिका लागाएर रवीन्द्र खड्का र...
अभिनेत्री बर्ष शिवाकोटी विवाहमा मेहन्दी लगाउँदै
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । शुक्रबार उनले अमेरिकामा बसोबास गर्ने आशिष गेलालसँग काठमाडौंको नागार्जुन रानीवनस्थित रेसु भिल्लामा विवाह गरेकी हुन् । विवाहमा परिवारका सदस्य, सीमित आफन्त र साथीहरु मात्रै सहभागी थिए ।
केकीले यसरी गरिन विवाह (फोटो फिचर)
नेपाली योग प्रशिक्षक खड्काले बनाए विश्व कीर्तिमान
नेपाली योग प्रशिक्षक विक्रम खड्काले ३ घण्टा ५० मिनेटसम्म वृक्षासनमा बसेर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् । बिहीबार लायन्स क्लब अफ काठमाडौं च्याम्पियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसअघि उक्त कीर्तिमान भारतका सनत रथको...
फोब्र्सको सूचीमा परेका धनाढ्य रोहित तिवारीसँग केकी देखिएपछि…
अभिनेत्री केकी अधिकारी विवाह बन्धनमा बाँधिने अन्तिम तयारीमा रहेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । उनी रोहित तिवारीसँग बिहीबार विवाह बन्धनमा बाँधिने हल्ला छ । बुधबार केकी र रोहितले मेहन्दी उत्सव मनाएको दाबी पनि गरिएको छ । पारिवारिक सदस्य र केही...
पल प्रकरण : पीडित भनिएकी बालिकापछि बाबुले पनि फेरे बकपत्र
अभिनेता पल शाह बलात्कार भनिएको प्रकरणमा नयाँ दीशामा गएको छ । पीडित भनिएकी बालिकाका बाबुले समेत आफ्नो बकपत्र फेरेपछि नयाँ चिरामा बहस भएको हो । जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र गर्ने क्रममा उनले मंगलबार सुरुमा आफूले जाहेरी दिएको तर पछि बुझ्दै...